Xildhibaan Xidig: Howlgal kasta waxaa is hortaaga qaar cadowga ka mid ah oo shacabka isu ekeysiinaya – Kalfadhi
Xildhibaan Xidig: Howlgal kasta waxaa is hortaaga qaar cadowga ka mid ah oo shacabka isu ekeysiinaya
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ciidanka dowladda ku bogaadiyey agab ciidan oo ay sheegeen in ay xalay ka soo fageen dhulka hoostiisa, meel ka tirsan Ceelasha Biyaha oo ku taala duleedka Muqdisho. Xildhibaanku waxa uu Golaha Shacabka ugu baaqay in ay is-garab-taagaan ciidanka. “Waxaan bogaadinayaa ciidamada Amniga oo talaabo amni oo muuqata ka qaaday cadowga ummadda Soomaaliyeed” ayuu Xildhibaan Xidig ku yiri dhigaal uu ku soo qoray Feysbuuggiisa.
Warbixinta uu Xildhibaanku soo xiganayo waxaa baahisay Warbaahinta Dowladda, waxaana ay muujineysaa hub aad u u fara badan oo nuucyao kala duwan leh, oo qaarkood ruujimeystay, kuwaas oo cagafta wax qodda ay ka soo saareyso dhulka hoostiisa. Warbaahinta Dowladdu waxay sheegtay in ay hubkaas lahaayeen Al-Shabaab, waxaana uu Xidig sheegay in ay hubaal tahay in ay jiri karaan meelo kale oo kooxdaas u ah keyd hub.
“Sida muuqata waxaa gacanta lagu dhigay mid kamida keydadka kooxaha amaanka kasoo horjeeda” ayuu yiri Xildhibaan Xidig. “Waxaa hubaal ah inay jiraan keydad kale oo kan lamid ah, waxaana Hogaanka Talisyada Amniga u soo jeedinayaa inay shan jibaaraan baadhitaanada iyo raadinta xogaha cadowga” ayuu hadalkiisa raaciyey. Shacabka ayuu ugu baaqay in ay ciidanka ku caawiyaan xogaha amniga kaalmeynaya ee uu sheegay in ay hayaan.
Xildhibaanku waxa uu eedeeyey dad uusan magac-dhabin, kuwaas oo uu sheegay in, iyagoo isu ekeysiinaya shacabka, ay caqabadeynayaan sugista amniga dalka. “Xusuusnaada howlgal kasta oo ciidamadu isku dayaan waxaa is hortaaga qaar cadowga kamida oo shacabka isu ekeysiinaya, iyagoo abaabula shacab dan-yar ah oo aan lasoconin dhagarta ay u maleegayaan” ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayuu Xildhibaanku ugu baaqay in ay sharciga raacaan, waxaana dabcan uu baaqaas macna u sameynayaa dhacdadii shalay ee Golaha Shacabka, oo ay xildhibaannaddii u kala qeybsameen qaar taageera in saxaafadda dibadda looga saaro Kulanka Golaha iyo qaar diiday, halkaas oo lagu gorfeyn lahaa amniga dalka, laakiin kulankaas waa fashilmay. “Xubnaha Golaha Shacabka iyo Guddoonka Golaha waxaan u soo jeedinayaa in loo hogaansamo Habraaca Dastuurka iyo Xeer Hoosaadka” ayuu yiri Xidig.
Hirgelinta doorashooyinka oo aan qoondo loogu darin miisaaniyadda Puntland iyo xukuumadda oo ka jawaabtay?
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed oo Muqdisho yimid, Garoowena ku sii jeeda